बाँदर अचानक घरभित्र पसेर मानिसका जुम्ल्याहा बच्चा लिएर फरार भएपछि...
सोमबार ३ माघ, २०७८
गृहपृष्ठ » अनौठो संसार » बाँदर अचानक घरभित्र पसेर मानिसका जुम्ल्याहा बच्चा लिएर फरार भएपछि…
बाँदर अचानक घरभित्र पसेर मानिसका जुम्ल्याहा बच्चा लिएर फरार भएपछि…
आईतबार २ फाल्गुण, २०७७
काठमाडौं । बाँदर अचानक घरमा पसेर बच्चा लिएर फरार भएको छ । यस्तो एउटा सनसनीपूर्ण घटना भारत, तमिलनाडुको तन्जाभुरबाट बाहिर आएको हो । त्यहाँ एक ८ दिनकी बच्चाको दर्दनाक मृत्यु भएको छ । बच्चाकी आमा भन्छिन् कि बाँदरहरूको एउटा समूह घरभित्र पसे र उनका जुम्ल्याहा बच्चा लगेर भागेका थिए ।
त्यसपछि लामो प्रयास गरियो, एक बालिकालाई छतबाट बचाईयो तर अर्कोको मृत्यु भयो । बुवनेश्वरी नाम गरेकी एक महिलाले ८ दिन अगाडि दुई जुम्ल्याहा छोरीलाई जन्म दिएकी थिइन् । बुवनेश्वरीकी एक बालिकाको मृत्युपछि उनी अत्यन्त दुःखी छिन् ।
बुवनेश्वरीले दिएको जानकारी अनुसार उनका दुवै बच्चाहरू शनिबार बिहान घर भित्रै सुतिरहेका थिए । तब बाँदरहरूको एउटा समूहले छानाका टाईलहरू हटाएर घरभित्र पसेका थिए । बाँदरको भिड भित्र पसेर बच्चाहरूलाई लिएर गएका हुन् ।
घटनाको दिन बुभनेश्वरी कामबाट फर्कंदा छतमा बाँदरहरू देखेर उनी छक्क परिन् र सहयोगका लागि चिच्याइन् । ती महिला का अनुसार केहि समय पछि उनीहरुले थाहा पाए कि छोरीहरु हराइरहेका थिए । उनीहरु छतमा पुगेपछि एउटा मात्रै बच्चा देखेका थिए, तर अर्की छोरी कतै थिइनन् । यस्तो दृश्य देखेर उनी जोडले रोइन् ।
उनको कराइरहेको आवाज सुनेपछि छिमेकीहरू सहयोग गर्न आए । उनले सहयोगका लागि आएकाहरुलाई बाँदरले छोरीहरु लिएर भागेको जानकारी दिइन् । गाउँलेहरुको मद्धतले एक बालिकालाई छतबाट नै उद्धार गरियो । तर अर्की बालिकालाई फेला पार्न सकिएन् ।
केही समय पछि बालिकाको लाश नजिकैको पानी ट्याङ्की नजिक फेला पारियो । त्यसपछि, चिकित्सक टोलीले हतारमा बच्चाको जाँच गर्यो तर त्यतिबेला सम्म उनको मृत्यु भैसकेको थियो । घटनाको जानकारी पाउने बित्तिकै प्रहरीले थप अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
लाजमर्दोको हद: टिकटकका लागि रंगशालामा अचानक कपडा खोलेर गोप्य अंग क्यामेरामा शो गरिन्
मकर संक्रान्तिको दिन त्रीनेत्रको बाछो जन्मियो, भगवान शिव मान्दै पूजा गर्न पुग्नेहरुको भीड
सुकुम्वाासीको हातमा करोडौँको बिटो, गाउँमा रातारात चमत्कार देखाएपछि प्रशासनले थाल्यो अनुशन्धान
पृथ्वीमा हामी स्वयं विचित्रका छौ, सबै चकित हुने यी १४ तस्विर हेर्नुहोस्
२२ वर्षअघि चोरी भएको सुन फिर्ता पाउँदा १२ करोड ७४ लाख मूल्य पुग्यो
बाँदरको मृत्युपछि ब्याण्ड बजाएर शवयात्रा : १० हजार मलामी ५० किमिदेखि आए
कोरोना लागेपछि पुरुषको नीजि अंग नै १.५ इन्च खुम्चिएपछि गरिएको अनुशन्धानले झनै झस्कायो !
एउटैको करोडौं मूल्य पर्ने सर्प शिकारीको हातबाट फेला : के छ त्यस्तो विशेषता ?
ठेलाले छोएको मात्र के थियो कारवालीले गरिब ठेलावालाका सबै फलफूल सडकमा फ्याल्न थालिन्
अब मृत्युले नै माथ खाने रहस्य : सन् २०९९ सम्ममा मानिसहरु १८० बर्षसम्म बाँच्छन् – बैज्ञानिक
जब भूकम्प बिना स्पन्ज जस्तै धर्ती हल्लिन थाल्यो, यो चमत्कार मात्र होइन -miracle
विश्व चकित : यो सही समाचार हो, २८ बर्षीय पुरुषले छोरी जन्माए ! -कसरी सम्भव भयो ?
अन्नतः नर्क जाने ढोका बन्द
श्रीमती साटेफेर गरेर यौन सम्पर्क गर्ने ठूलो गिरोह पक्राउ, यी उच्च वर्गका कैयौँ रहेको खुलासा
फ्रान्सको कानूनले बल्ल रोक्यो परिवार भित्र शारीरिक सम्बन्ध राख्न पाउने विषय, को–कोसँग पाउँथे !
माघे संक्रान्तिको दिन बिहानै भयानक जीप दुर्घटना: नौ महिने शिशुसहित ६ जनाको मृत्यु, ८ गम्भीर घाइते
कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अति जरुरी सूचना [ सूचनासहित ]
जापानबाट आएर भरतपुरमा सुत्केरी गराउन गएकी तारा अस्पतालको लापरबाहीले सधैँका लागि अस्ताइन्
पवित्र शालिनदी मेलामा आउने भक्तजनहरूका राखियो यस्तो शर्त